10 WINDOSE သင်၏ကွန်ပျူတာကို TURN OFF လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
အဓိက Windows ကို
Windows 10 ကို system ကိုကို disable
ဓာတ်ပုံ loading ပြီးနောက်သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိပါက, သင်သည်အလွန်အလွယ်တကူလူမှုကွန်ယက် Facebook တွင်အတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အပြင်အဆင်များ, ကျေးဇူးတင်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်သမျှကိုဖျက်ပစ်ရန်အချိန်သာမိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းလိုသကဲ့သို့, ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်မှီ, သင်ပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ပစ်ချင်ဘယ်မှာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာ, ကို log in ပါ။ အဆိုပါ Facebook မှာနေအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်လုံလောက်သောလယ်ပြင်, သင့် username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်, ပြီးတော့, ပရိုဖိုင်ထဲမှာ Log in ဝင်ရန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်အပ်လုဒ်တင် thumbnail ကိုရုပ်တုဆင်းတုများ၏စာရင်းကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီကြည့်ရှုရန်မဟုတ်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ လိုအပ်သောကို Select လုပ်ပါ, တစ်ဦးခဲတံ၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကိုကြည့်ဖို့ကပေါ် pointer ကိုရွှေ့။ ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်တည်းဖြတ်စတင်နိုင်ပါသည်။
အခုတော့ထို option ကိုရွေးပါ "ဒီဓာတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်ပါ"ပြီးတော့သင့်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတည်ပြုပါ။
သင်တစ်ဦးအယ်လ်ဘမ်ထဲတွင်နေရာဖြစ်ကြောင်းမျိုးစုံဓါတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်လျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာတပြင်လုံးကိုအရာဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကနေသွားကြဖို့လိုအပ် "သင်၏ဓါတ်ပုံကို" အပိုင်း "အယ်လ်ဘန်".
အခုဆိုရင်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ကတ်တလောက်၏စာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါလိုချင်သောကို Select လုပ်ပါနဲ့သူ့ညာဘက်သောဂီယာပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။
အခုတော့ Edit menu ကိုအတွက်ထို option ကိုရွေးပါ "အယ်လ်ဘမ်ကိုဖျက်မည်".
စာမျက်နှာကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ဧည့်သည်များသင်၏ဓါတ်ပုံများတွေ့နိုင်ပါသည်အရာကိုအာရုံစိုက်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, သင်ကသူတို့ကိုဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဓါတ်ပုံအသစ်များထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာ display ကိုချိန်ညှိ။
ဗီဒီယို Watch: How to fixabroken heart. Guy Winch (အောက်တိုဘာလ 2019).
Graphical Windows 10 ကိုစကားဝှက်ကို
PC ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ MPC က Cleaner Remove
အော်ပရာ Browser ကို: Configuration ကို Plugin ကို
သငျသညျ Vkontakte ထံမှဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု, Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ Add-ons
။ အရှိဆုံးမကြာခဏအရင်ကဆိုရင်များအတွက်မေးခွန်းများကိုမေးမသာသူတို့ထဲကဖြစ်ကောင်းတဦးတည်း - အဘယ်ကြောင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လုပ်ဖို့နှေးကွေး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်ပြုလုပ် "လူအပေါင်းတို့သည်နွေရာသီ" မကြာသေးမီကအထိကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုဿုံနှင့်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကပြောပါတယ်ယခုအခါဒါပေါ်နာရီဝက်အဘို့ loaded နှင့်လည်း program ကို run နှင့်နေသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အဘယ်သို့ငါ Google Chrome ကို (Google Chrome က) ကို update သလဲ?
သင့်ရဲ့ e-mail, တစ်ဦးလက်မှတ်ထည့်သွင်းခြင်း
https://termotools.com my.termotools.com © Windows ကို 2019